Amụma nke njikarị ojii na CCSP
Uru nke mgbagwoju anya igwe
Akaebe ojii na-ahụ maka ọrụ nchebe nchebe - ihe ndị dị na ya na uru ya
Mgbalị na uru nke usoro ahụ
Okwu kachasị mma na kọmputa IT - ígwé ígwé ígwé ígwé ojii, na-akọwa ụdị nchịkọta nke njirimara akụ dị ka CPU, RAM, bandwidth, space diski, na ihe ndị ọzọ na-emepụta na weebụ. Ihe ndị a na-emepụta site na netwọk nkesa nke sava ahụ na-ewepụ na ọtụtụ data na-elekwasị anya na ndị ọkachamara ọkachamara n'èzí. Ụdị ọnọdụ ngbanwe, ọdịdị na àgwà na-adịghị agbanwe agbanwe na akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ bụ uru ndị bara uru ma ọ bụ ịghọta usoro igwe ojii. Ọ na-ehichapụkwa ihe ọ bụla nke akụ dị ka ọ na-eji 'akwụ ụgwọ dị ka ị na-eji' gosipụta ebe achọrọ ndị ahịa ọgwụgwụ ka ha kwụọ ụgwọ maka naanị akụ ha na-arịọ na iri.
Igwe igwe na-amalite ịmalite ụkwụ dị ka oge na-esote mkpakọrịta na oke na obere gburugburu ụwa na-eji ike ígwé ojii mee ihe iji mezuo atụmatụ achụmnta ego ha ma nwekwuo aka na azụmahịa.
Onye ọrụ ọhụụ na-ahụ maka ọrụ nchebe ma ọ bụ CCSP bụ nsogbu nke mgbagwoju anya n'etiti Cloud Security Alliance (CSA) na (ISC) ², usoro nke e mere iji gbakwunye ma jiri abụọ nkwenye dị ugbu a: (ISC) ² bụ akwụkwọ ozi gbasara Ụlọ Ọrụ Nchebe na CSA. Akwụkwọ nke Nchebe Nchebe nke Ihuigwe.
Igwe ojii dị ka e kwuru n'elu bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, na-agbanwe agbanwe ma na-ehichapụ. Ka o sina dị, a na-ezigara ndị ọchịchị na netwọk na-emeghe nke na-eme ka ọ ghara ịdaba na nsogbu dị iche iche nke ihe ize ndụ ndị dị n'èzí. N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú a, ígwé ojii nke nghọta na-akọwa nchebe data nchebe na ịmepụta usoro iji belata mmetụta ha bụ ihe dị mkpa. Ndi di elu enweghi ike ime ka ha ghara inweta ihe omuma ha na n 'onodu a choro ndi okachamara ruru eru ndi nwere ihe omuma na amamihe iji merie onu ogugu.
Usoro nchebe Cloud (CCSP) site na Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ na-ezube ịkwadebe gị niile ozi dị mkpa gbasara ikike nke igwe ojii, na nnweta nke nchedo nke a pụrụ iji mee ihe, na otu esi eme ka ha kwe nkwa na ha ga-eme ka igwe ojii kpuchie ma chebe ya. Akwụkwọ a site na ntọala ntọala a ga-enye gị ohere ịrụzu nnukwu nchebe nchebe kachasị mma ma nyere gị aka ijikọta ikike kachasị nke ígwé ígwé ígwé ojii n'enweghị ihe ọ bụla nwere ike ibute nkwenye data.